Refona… tsy milavo lefona | NewsMada
Refona… tsy milavo lefona
Par Taratra sur 28/07/2020
Mbola mitohy amin’izao ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Mandra-pahoviana? Miankina amin’ny atao ihany io: ny tsirairay miaraka no daholobe… ho mpandresy. Miady hatrany ny tena, raha mbola tsy resy ny valanaretina: tsy mitsaha-mitombo, ohatra, ny tranga vaovao mitondra tsimokaretina; eny, na be lavitra aza ny marary sitrana no ho izay mbola tsaboina.
Farafaharatsiny amin’izay ady izay, afa-miaina andavanandro amin’ny valanaretina toy ny amin’ny areti-mifindra hafa, ohatra, ny tena, araka ny filazan’ny sasany azy? Mbola mafy ny ady, sarotra. Tsy ady amin’ny fihanaky ny valanaretina ihany no atrehina amin’izao lazon’ady izao, fa eo indrindra koa adim-piainana andavanandro. Tsy misy tsy sahirana amin’izao fa mafy ny fiantraikan’ny fepetra?
Na izany aza, tsy maintsy atrehina ny fisorohana sy fitsaboana ny fihanaky ny valanaretina. Miady hatrany ihany amin’izao lehibe iombonana izao; eny, na refona sy noana aza, na sahirana aza. Mila hasiana vidiny sy hasiny ny fiaretana nandritra izay efa-bolana mahery izay: fahafoizan-tena, fotoana, fitadiavana… Nampiombona ny Malagasy izany mba tsy hitondra ho amin’ny fisarahana aty am-parany.
Na ho ela na ho haingana, tsy maintsy hisy farany izao fihibohana noho ny hamehana ara-pahasalamana izao. Raha izao, sanatria, no tamoraina na anaovana mosaly ny fiatrehana ny izany, ho faty antoka iray lavaka fa hihahaka sy hihanaka ny aretina. Izay no iaretana sy aharetana amin’izao ady lehibe iombonana izao. Tsy mbola vita tanteraka tsinona ny ady tokony hampiombona hatramin’ny farany.
Azo arenina ihany atsy ho atsy ny fitadiavana, na misy aza no tonga amin’ny fitenenana hoe: tsy matin’ny aretina ny vahoaka sahirana amin’izao, fa matin’ny hanoanana. Tsy efa misy ezaka amin’ny karazana fanampiana fanamaivanana fahasahiranana? Eny, na tsy mahafa-po aza, tsy mahahenika ny rehetra, tsy maharitra. Mila ezaka koa ny ady amin’ny aretina raha tiana hifarana? Na refona aza, tsy milavo lefona…